Imbali yoMdlalo weBingo
Ukususela kwiCarnival ukuya kwiCawa kunye neCasino
I-Bingo ngumdlalo othandwayo onokuyidlala kwi-cash and prizes. Iimidlalo zeBingo ziphumelele xa umdlali efanisa amanani kwikhadi lawo kunye nalawo athathwe ngesohlwayo ngumfowuni. Umntu wokuqala ukugqiba umloli wendlela, "Bingo." Inani labo lihlolwe kunye nomvuzo okanye imali ehlawulwayo. Iipateni zinokuhluka kwiiseshoni zokudlala, ezenza abadlali banomdla kwaye bahlanganyele.
Umlando wegeyimu unokulandelwa emva kowe-1530, kwiLottery ebizwa ngokuthi " Lo Giuoco del Lotto D'Italia ," eqhubeka idlala yonke iMigqibelo e-Italy.
Ukusuka eItali, umdlalo wenziwa kwiFransi ngasekupheleni kwe-1770, apho yayibizwa ngokuba yi " Le Lotto ", umdlalo odlalwa phakathi kwabaseFransi abacebileyo. AmaJamani aphinde adlala inguqu yomdlalo kwi-1800s, kodwa ayisebenzisa njengomdlalo womntwana ukunceda abafundi bafunde izibalo, isipelingi kunye nembali.
E-US, i- bingo yayibizwa ngokuba yi-"beano" ekuqaleni. Kwakuyimidlalo enhle yelizwe apho umthengisi angakhetha iireksi ezibhalwe kwiibhokisi ze-cigar kunye nabadlali babeza kumakisha amakhadi abo kunye neembotyi. Bakhala ngokuthi "beano" xa bephumelele.
Edwin S. Lowe kunye neKhadi leBingo
Xa umdlalo ufike eMntla Melika ngo-1929, waziwa ngokuba yi "beano". Kwakuqala kudlalwa kwiidlovini kufuphi naseAtlanta, eGeorgia. Umthengisi weentengiso zaseNew York u-Edwin S. Lowe wabiza ngokuthi "bingo" emva kokuva umntu ephosakeleyo ebiza "bingo" endaweni ye "bano".
Waqesha umfundisi we-Columbia University maths, uCarl Leffler, ukumnceda akwandise inani lokudibanisa kumakhadi e-bingo.
Ngo-1930, uLeffler waqulunqa amakhadi angama-6000 e-bingo. Ziye zaphuhliswa ukuze kubekho amaqela amanani angaphinda aphindaphindiweyo kunye neengxabano xa abantu abangaphezu komnye bafumana iBingo ngexesha elinye.
ULowe wayengumYuda owayefuduka ePoland. Inkampani yakhe yase-ES uLowe ayivelanga kuphela amakhadi e-bingo, kwaye yavelisa kwaye yayithengisa umdlalo uJahtzee , apho wathenga amalungelo avela kwisibini esasidlala kwi-yacht yabo.
Inkampani yakhe yathengiswa kuMilton Bradley ngowe-1973 ngeedola ezingama-26. ULowe wafa ngo-1986.
Umfundisi ongumKatolika wasePennsylvania waya kuLowe malunga nokusebenzisa i-bingo njengendlela yokwenza imali yecawa. Xa i-bingo iqale ukudlalwa kwiicawa zanda kakhulu. Ngowe-1934, iikhosi ezili-10,000 zebingo zadlalwa ngeveki. Nangona ukugembula kuvinjelwe kumazwe amaninzi, banokuvumela ukuba imidlalo yebingo ibanjwe ngamasonto kunye namaqela angenzi nzuzo ukuphakamisa imali.
I-Bingo ibe enye yemidlalo eyenziwa kwii-casinos ezininzi, zombini e-Nevada kunye nalabo basebenzelana nezizwe zaseMelika zaseMelika. ES Lowe wakha ihotele ye-casino eLas Vegas Strip, i-Inn Tallyho. Namhlanje, i-dollar engama-dollar engama-90 yezigidi isetyenziswe kwi-bingo nganye iveki eMntla Melika yedwa.
I-Bingo kwi-Homes and Nursing Homes
I-Bingo ngumdlalo odlalwayo owenzelwe unyango lononophelo kunye nokuhlalisana kwabantu kwiindawo zokunakekela abanezakhono kunye namakhaya omhlalaphantsi. Kulula ukusebenza kunye nabasebenzi abambalwa okanye amavolontiya, kwaye abahlali banokudlala kunye neendwendwe zabo. Ithuba lokuphumelela umvuzo omncinci ngumkhwa. Udumo lwayo luya kufuduka xa abantu abadala beli bingo bebingo ebusheni babo beselula ukuya kwizizukulwana ezintsha eziphakanyiswe kwimidlalo yevidiyo.
Ngubani owasusa i-Seismograph?
Ngubani owafaka iMicintosh?
Imbali yePowy and Desserts
Imbali yeeRakhler Skates
Imbali ye-Hair Styling
Imbali yolawulo lwe-Television kude
UNelson Rolihlahla Mandela - owayengumongameli waseMzantsi Afrika
Iimpawu zemibuzo ebalulekileyo
I-SCAM: I-800-Pound (okanye i-700-Pound) Inyoka yaxutywa ngaphandle kweLake
Ukusebenzisa i-Bait Rigs ukufumana i-Walleye kwi-Kabetogama Ichibi
Ziziphi iiNdawo eziNcinci zezoQoqosho?
Iifayili zeFiFii - iiPros and Cons
Iimangaliso ze-Wreck Diving
Indlela yokukhetha ii-Spares - i-Lefties
Ngaba Ndiyifuna Imoto kwiKholeji?
Iikholeji ze-Free Online
Uncedisa abaFundi beMfundo eziZodwa
Ukuxineka Okukhulu, iMfazwe Yehlabathi II, neye-1930
Ukudala, ukuhlahlela nokuCwangcisa i-XML Documents nge Delphi
Dweba iNdlu yeBlue Age Comic Book
Indlela yokuhlawula i-Mustang yakho usebenzisa i-SCT X3 Power Flash Programmer
Iinqwelo ezi-13 ezihamba phambili zokuhamba ngee-cycling zokuthenga ngo-2018